वर्षातले ठाउँठाउँमा पहिरो गएर मध्यपहाडी लोकमार्ग अबरुद्ध ! प्रजिअ क्षेत्रीको टोली पहिरो पन्छाउदै मध्यपहाडी लोकमार्ग अनुगमनमा, लोकमार्गका प्रमुख काठमाडौ सयरमा …! – ebaglung.com
वर्षातले ठाउँठाउँमा पहिरो गएर मध्यपहाडी लोकमार्ग अबरुद्ध ! प्रजिअ क्षेत्रीको टोली पहिरो पन्छाउदै मध्यपहाडी लोकमार्ग अनुगमनमा, लोकमार्गका प्रमुख काठमाडौ सयरमा …!
२०७६ श्रावण २१, मंगलवार १५:१९	Home Slider, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार
मित्रलाल खरेल, बागलुङ २०७६ साउन २१ । अबिरल वर्षाका कारण जिल्लाका विभिन्न स्थानमा पहिरो गएर ठुलो नोक्सान व्यहोर्नु परेको छ । खासगरी जथाभावी खनिएका मोटरबाटोका कारण पहिरो गएकोे स्थानीयको बुझाई छ । गाउँ गाउँमा खनिएका मोटर बाटो मात्र नभएर बागलुङको विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको मध्यपहाडी लोकमार्गको विभिन्न भागमा पहिरो गएर लोकमार्ग छिया छिया परेको छ ।
केहि दिन पहिले अबिरल वर्षाका कारण बडीगाडमा आएको बाढीले तुरतुरे फुटेर करीब २ सय मिटर लोकमार्ग भत्किएको छ भने आज विहान मात्रै गल्कोट नगरपालिका ११ रिघा फेँदीमा पहिरो खसेर लोकमार्ग अवरुद्ध बनेको छ । लोकमार्गबाट पहिरो हटाउने कार्य जारी रहेपनि विहान ५ बजे गएको पहिरो दिउसो २ बजे सम्म हटाउन सकिएको छैन ।
बडीगाड गाउपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकाको सीमानामा रहेको तुरतुरेको पहिरो र बडीगाड खोलाको बाढीले तुरतुरेताल भत्काएपछी लोकमार्गमा पुयाएको क्षतीको अनुगमन तथा भिङगिठे देखी पश्चिम बुर्तिवाङ सम्म बैकल्किप सडकको विषयमा विचार विमर्श गर्न बिपद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुकबहादुर क्षेत्रीको नेतृत्वमा अर्जुनवाण गण घोँडाबाँधेका प्रमुख सेनानी भुवनराज देवकोटा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका निमित्त प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक झबेन्द्र भट्टराई, राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुख नरेन्द्र राज गिरी, पत्रकार सहितको टोली ठाउँठाउँको पहिरो पन्छाउदै तुरतुरे तर्फ अघी बढीरहेको छ र अहिले रिघाको पहिरोमा रोकिएको अवस्था छ ।
यसरी वर्षाका कारण मध्यपहाडी लोकमार्ग ठाउठाउँमा पहिरो गएर अवरुद्ध छ । सवारी साधनहरु सन्चालनमा आउन सकेको अवस्था छैन भने सयौँ यात्रुहरु गन्तव्यमा पुग्न नसकी बीचबाटोमा अलपत्र अवस्थामा सास्ती खेपिरहनु परेको छ । तर एउटा बिडम्वना के भने मध्यपहाडी लोकमार्ग बागलुङ खण्डका प्रमुख सिनियर डिभिजन ईन्जिनियर आषिश थापामगर जिल्लाबाट नदारत छन् ।
तुरतुरेका कारण त्यस पश्चिम रुकुमसम्मको सवारी यातायात ठप्प छ, त्यस क्षेत्रका जनता महंगीको चपेटामा परेका छन् । विरामी पर्दा समेत उपचार गर्न जान पाएका छैनन् । लोकमार्गका प्रमुख थापामगर आफ्नो अहम् जिम्मेवारीबाट पन्छिएर राजधानीमा घुमिरहेका छन् । जिल्लावासीले मध्यपहाडी लोकमार्ग बागलुङ खण्डका प्रमुख थापामगरको गैह्रजिम्मेवारी बिरुद्ध आवाज उठाई रहेका छन् तर जनताको यो मार्मिक आवाज न प्रदेश न संघीय सरकारकै कानमा पुग्यो । त्यस्को पीडा जिल्लावासीले भोग्नु बाध्यता बनेको छ ।
तस्वीर सौजन्य : अर्जुन ढकाल ।
मोटर बाटोको कारण जनता प्राबि, किटेनी धरापमा : न रह्यो बाटो, न रहने भयो बिद्यालय !